Zimbabwe Lawyers For Human Rights Inoudza Dare ReSenate Kuti Kodzero dzeVanhu Dziri Kutyorwa muNyika.
Kukadzi 24, 2016
VaDzimbabwe Chimbga naMuzvare Roselyn Hanzi.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu, reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR nemusi weChitatu rakaudza dare reSenate kuti kutyorwa kwedzoro dzevanhu kuri kuwedzera zvakanyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kwehupfumi uye mapazi ehurumende ndiwo ari pamberi pekutyora kodzero idzi.
Vakuru vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZLHR VaDzimbabwe Chimbga namuzvare Roselyn Hanzi vakaudza komiti yeSenate inoona nezvekodzero dzevanhu kuti kodzero dzevanhu dziri kunyanyotyorwa munyaya dzine chekuita nedzidzo, pekugara, hutano pamwe nechikafu.
Vaviri ava vati sangano ravo riri kushushikana kuti kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti hurumende inosungirwa kuwanisa vanhu pekugara, zvekudya, dzidzo pamwe nehutano, vanhu vakawanda vari kuputsirwa dzimba dzavo mumaguta.
Vatiwo vana vari kudzingwa muzvikoro uye madzimai anotadza kubhadhara mari kuzvipatara vari kuvhariwa muzvipatara mushure mekusununguka vachinzi vanofanira kutanga vabhadhara mari.
Vatiwo apo nyika yakatarisana nenzara inotyisa, vamwe vanhu vari kunyimwa chikafu nekuda kwekuti havasi nhengo dzebato riri kutonga reZanu-PF.
VaChimbga vati zviri pachena kuti bumbiro nekodzero dzevanhu zvirikutyora zviri pachena uye mapazi ehurumende ndomamwe ari kuita izvi. Vatiwo imwe nyaya inovasuwisa inyaya yekunyangarika kwemurwiri wekodzero dzevanhu VaItai Dzamara pamwe nekuti hurumende inenge isiri kutora matanho ekuvatsvaga.
Asi Senator Judith Mawire vanomiririra Mutare Central vari nhengo yeZanu-PF vati vanoshamisika kuti sei pari kungotaurwa nyaya yaVaDzamara ipo paine vamwe vakatsakatika munyika vakawanda.
Asi muzvare Hanzi vati sangano ravo rinobatsira munhu wese munyika risingatarise kuti wabuda mumba maani.
VaChimbga vatsinhirawo mashoko amuzvare Hanzi vachiti vese vane nyaya dzavo vakasununguka kudzitaura kusangano ravo uye vanobatsira kana vachikwanisa.
Ishe Daster Chisunga vekuMbire, vanove nhengo yekomiti iyi, vati kubva kuhumbowo hwapihwa nemagweta eZLHR zviri pachena kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa munyika uye komiti yavo inofananira kuongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu nechinangwa chekugadzirisa zviri kunetsa.
VaChimbga vati vanofara nechido charatidzwa nekomiti iyi vakatiwo hurumende inofanira kutora matanho ekutevedzera bumbiro remutemo iro rinopa vanhu kodzero dzavo dzose.